Ubuntu, yazi yonke into ngale nkqubo yasimahla esekwe kwiLinux | Ubunlog (Iphepha 10)
Umhleli wevidiyo owaziwayo u-Avidemux uhlaziyiwe kuhlobo lwe-2.7.0
I-Avidemux yinkqubo ebalaseleyo egxile ekuhlelweni kwevidiyo, iAvidemux ibhaliwe kulwimi lwenkqubo yeC / C ++ kwaye isebenzisa iilayibrari zemizobo yeGTK + kunye neQt, esi sisicelo seplatform.
NodeJS iseva yewebhu ukuvavanya izikripthi zakho kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokwenza eyethu Iseva yeNodeJs ukuvavanya okwethu izikripthi kwalapha ekhaya, sisebenzisa Ubuntu njengesiseko.
Coinmon, jonga amaxabiso ee-cryptocurrensets ezivela kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga eCoinmon. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba silazi ixabiso lee-cryptocurrensets esinokuzifumana kwiimarike, kwaye konke oku kuvela kwisiphelo.
Ukude ungene kwikhompyuter yakho nge-DWService evela kwisikhangeli
I-DwService yinkonzo esivumela ukuba singene kude kwezinye iikhompyuter kunye nokusebenzisa okulula kwisikhangeli sewebhu, siyenze ibe yeyona ndlela iphambili kunye nolunye esele lusaziwa.
Faka i-LAMP (iLinux, i-Apache, i-MySQL kunye ne-PHP) kwi-Ubuntu 17.10
Molo, ngeli xesha ndiza kukubonisa indlela yokufaka i-LAMP (iLinux, i-Apache, i-MySQL kunye ne-PHP), le seti yezixhobo zemithombo evulekileyo esivumela ukuba siqhube kwaye sibambe usetyenziso lwewebhu kwikhompyuter yethu.
EasyJoin, thumela iifayile phakathi kwefowuni yakho kunye nePC yakho ngaphandle kwe-Intanethi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-EasyJoin. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba sabelane ngeefayile, izingxoxo, ukufowunelwa, ukuthumela iSMS nokunye phakathi kwefowuni kunye nePC, ngaphandle kwesidingo se-intanethi.
I-QMplay2, isidlali esipheleleyo sobunzima kunye nemultimedia yeplatform
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iQMplay2. Lo ngumdlali wemultimedia omnandi, ongasindiyo kunye neplatform eninzi esinokuthi ngayo, ukongeza ekudlaleni zonke iintlobo zeefayile, ukubukela iividiyo zeYouTube ngaphandle kwesikhangeli sewebhu.
I-Pinfo, isixhobo se-CLI ukufaka imibala kumadoda kunye namaphepha olwazi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPinfo. Le nkqubo ye-CLI iya kusinceda sibeke amaphepha endoda kunye nolwazi inkqubo yokusebenza enika lona kuthi.
Faka, lawula ikhamera yakho kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Entangle. Le nkqubo yomthombo ovulekileyo iya kusivumela ukuba silawule iikhamera zethu ngokufanelekileyo kwi-Ubuntu desktop.
Ubuntu 17.10 iya kufumaneka ngoJanuwari 11 kwakhona
Ubuntu 17.10 ukufakela umfanekiso we-ISO uya kufumaneka kubo bonke abasebenzisi kwakhona. Iya kufumaneka kwakhona nge-11 kaJanuwari kunye nezikhokelo kunye nezifundo ukusombulula iingxaki ezenzekileyo ...
I-Bibfilex, umphathi wasimahla weencwadi kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Bibfilex. Le nkqubo ngumphathi webhayibhile yasimahla kuyo nayiphi na inguqulelo Ubuntu. Ayisiyonto ilungileyo, kodwa kufanelekile ukudutyulwa.
Vula iphepha elingenaPhepha, ukuskena, lawula kunye nokugcina amaxwebhu kubuntu bakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiphepha elingenamaphepha. Esi sixhobo ngumphathi wamaxwebhu amnandi wenkqubo yethu yokusebenza Ubuntu.
I-Sayonara Music Player 1.0, isidlali somculo esimnandi Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka iSayonara Music Player 1.0. Esi sisidlali somculo esigqibeleleyo seQt somculo kwinkqubo yethu yokusebenza Ubuntu.
I-Tablao, indlela elula yokwenza iitafile ze-HTML
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iTablao. Ngesi sixhobo siya kuba nakho ukwenza iitafile ze-HTML ngendlela elula ku-Ubuntu, kodwa ngaphandle kwesitayile, esinokuthi emva koko sizisebenzise kwiiprojekthi zethu ze-HTML.
I-Linux Mint 19 iya kubizwa ngokuba yiTara
I-Linux Mint 19 iya kubizwa ngokuba yiTara kwaye ayisayi kusekelwa kwi-Ubuntu 16.04.3 kodwa iya kusekelwa kwi-Ubuntu 18.04 Bionic Beaver ...
I-EasyTag, umhleli wethegi yomculo wakho ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-EasyTAG. Ngalo mhleli sinokuhlela iithegi ngokukodwa okanye ngobuninzi kwilayibrari yethu yomculo ku-Ubuntu.
Guqula-iqokobhe, uguqulele kulo naluphi na ulwimi ukusuka kumgca wokuyalela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Shell-Shell. Ngale nkqubo singaguqulela kulo naluphi na ulwimi ukusuka kumgca wokuyalela Ubuntu.
I-Spotify sele inesicelo esisemthethweni kwifomathi ye-snap
Isicelo esisemthethweni seSpotify sele sinenguqulo kwifomathi yokufaka kwiinguqulelo zamva nje ze-Ubuntu, into esombulula iingxaki ezininzi, ezidlulileyo nezizayo ...
FinchVPN, qhagamshela le nkonzo nge-OpenVPN kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFinchVPN. Masibone ukuba uqhagamshela njani kule nkonzo yewebhu usebenzisa i-OpenVPN usebenzisa Ubuntu 17.10.
Inxi, CLI ngolwazi malunga neqela lethu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga inxi. Esi sisixhobo se-CLI sokufumana ulwazi malunga nezixhobo kunye nezinye izinto zeqela lethu Ubuntu.
Kumnyama 2.4.0, amanqaku amaninzi kule nguqulo intsha
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kumnyama 2.4.0. Olu luguqulelo olutsha lwale nkqubo yokuqhubekekayo yokufota inezinto ezininzi ezintsha xa kuthelekiswa neenguqulelo zayo zangaphambili.
Iibakaki zoHlelo 1.11, ufakelo nge-Snap kwi-Ubuntu 17.10, 16.04
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka umhleli we-Brackets 1.11 kwi-Ubuntu 17.10 kunye ne-16.04. Sinokufaka ngokulula lo mhleli wekhowudi ngokusebenzisa iphakheji yayo ehambelanayo.
Ingqalelo !! Sukufaka Ubuntu 17.10 kwiikhompyuter zeLenovo
Ubuntu 17.10 ibangela iingxaki ezinzulu kwiikhompyuter ezithile zeLenovo kunye neAcer, into ebangele ukuba iqela le-Ubuntu lisuse umfanekiso wokufaka ...
Ukukhawuleza-kwe-ehl, ulinganise umda webhendi yonxibelelwano lwakho ukusuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSpeedtest-ehl. Esi sixhobo siza kusinceda ukulinganisa umda wendlela yethu ukusuka kwisiphelo sendlela.
Yarock Music Player 1.3.0, umdlali womculo Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuhlobo lwamva nje lweYarock Music Player, eyi-1.3.0. Lo ngumdlali olula we-Ubuntu.
Ii-HeRMs, lawula incwadi yakho yokupheka kumgca wokuyalela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ii-HeRMs. Le yincwadi yokupheka esinokuyilawula ngokulula ukusuka kumgca wokuyalela.
IVLC 3.0 RC2, ufakelo ku-Ubuntu 16.04, 17.10 ngephakheji yesnap
Kule nqaku siza kujonga i-VLC 3.0 RC2 version. Lo ngumdlali weqonga eliphambili elinokuphinda uvelise yonke into.
Django, faka esi sikhokelo ku-Ubuntu ngokulula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga isakhelo se-Django. Kule nqaku siza kubona indlela yokuyifaka ngokulula kwi-Ubuntu nakwiziphumo zayo.
I-Aureport, ivelisa isishwankathelo seelog zenkqubo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga usetyenziso olusisiseko lomyalelo we-aureport. Lo myalelo uya kusinika iingxelo malunga nenkqubo.
Ipipi, iziseko, kunye nolawulo lwephakheji yePython
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPIP. Lo ngumphathi wephakheji yePython eya kwenza ubomi bethu bube lula.
Yabelana ngesahlulo, yabelana ngeefayile zobuphi na ubungakanani ngokukhuselekileyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-OnionShare. Ngesi sixhobo sinokwabelana ngeefayile ngokungaziwa nangokukhuselekileyo sisebenzisa i-TOR.
Buka, enye indlela yasimahla kwiCaliber yoBuntu 17.10
I-Buka ngumphathi we-ebook onokufakwa ku-Ubuntu 17.10 kwaye iyindlela yasimahla kunye nefanelekileyo kubantu abaninzi abangasebenzisi i-Caliber ...
Ixesha elongezelelekileyo, i-CLI eya kusivumela ukuba silazi ixesha lehlabathi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiOverTime. Lo mgca wokudibanisa umgca uya kusivumela ukuba silazi ixesha kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi
I-Cumulonimbus, usetyenziso olulula lokumamela ipodcast
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiCumulonimbus. Lo ngumthengi ukumamela iipodcasts zethu esizithandayo ezivela ku-Ubuntu.
I-MEGAsync, faka umxhasi we-MEGA kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-MEGAsync. Le iklayenti yokuvumelanisa ifayile yeMega Ubuntu bethu.
IBlueGriffon, omnye umhleli wephepha lewebhu leWYSIWYG
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iBlueGriffon. Lo ngumhleli wephepha lewebhu leWYSIWYG esinokuthi senze amaphepha ewebhu alula
I-OMF (Oh Intlanzi yam), yenza ngokwezifiso i-Fishshell yakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-OMF (Oh Intlanzi yam). Le projekthi iya kusivumela ukuba siziqhelanise ngokupheleleyo neFishshell.
Uyifaka njani i-KDE Qhagamshela kwiGnome
Isifundo esincinci sendlela yokufaka kunye nokuqhuba usetyenziso lwe-KDE ngokuchanekileyo kwi-Ubuntu 17.10 nakwi-Ubuntu neGnome njenge-desktop ...
I-toplip, into enomdla kakhulu ye-CLI yokubethela kunye nokususa iifayile
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iToplip. Esi sixhobo se-CLI siya kuba luncedo olukhulu kuthi ekubetheleleni nasekuguquleni iifayile
I-Bash-insulter, inkqubo yakho iya kumngcikiva umsebenzisi ngokupela kakubi umyalelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Bash-insulter. Esi skripthi siya kumthuka umsebenzisi xa echwetheza ngokungachanekanga umyalelo kwisiphelo sendlela
Uyibonisa njani ipesenti yebhetri kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokubonisa ipesenti yebhetri kwindawo ephezulu yeGnome ye-Ubuntu 17.10, uguqulelo oluzinzileyo lwamva nje lwe-Ubuntu ...
Mhlawumbi, isibonisa ukuba umyalelo okanye inkqubo iya kwenza ntoni ngaphambi kokuba uyenze
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga mhlawumbi. Esi sixhobo siza kusazisa ukuba yintoni umyalelo okanye inkqubo eza kuyenza ngaphambi kokuba uyenze.
Ipensile, yenza iimodeli kunye neeprototypes ngokulula kakhulu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPensile. Ngale sicelo sinokwenza ngokulula iiprototypes kunye neemodeli ku-Ubuntu.
AmzSear, khangela iimveliso kwiAmazon kulayini womyalelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-AmzSear. Esi siskripthi esincinci esivumela ukuba sikhangele iimveliso kwiAmazon kwisiphelo.
I-Spyder, indawo enamandla yokunxibelelana yePython
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSpyder. Le yi-IDE enamandla esinokuphucula ngayo iikhowudi zethu kwiPython.
I-Cutegram, umxhasi we-desktop ongekho semthethweni weTelegram
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Cutegram. Lo ngumxhasi we-desktop ongekho semthethweni weTelegram enokhetho oluninzi.
Intlanzi, umgca wokuyalela olumkileyo kunye nokusebenziseka lula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiNtlanzi. Umgca womyalelo okrelekrele ekulula ukuwusebenzisa kunye namathuba amaninzi.
IMedleyText, thatha amanqaku enkqubo kunye nesitayile
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiMedleytext. Le app ithatha inqaku ngesitayile malunga nokucwangciswa.
IFayileZilla 3.29.0, faka ingxelo yokugqibela ngeFlatpak
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFayilezilla 3.29. Siza kubona indlela yokufaka ingxelo yakutshanje yalo mthengi usebenzisa iphakheji yeplppak.
Undistract-me, ufumana isaziso xa ugqiba i-terminal command
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Undistract-me. Esi skripthi siza kubonisa isaziso xa ukwenziwa komyalelo kugqityiwe.
Itheyibhile yokuKhanya, umthombo wokwenza ngokwezifiso kunye nokuvula i-IDE
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiTheyibhile yokuKhanya. Lo ngumthombo onokwenziwa ngokwezifiso kwaye ovulekileyo kwisizukulwana esilandelayo se-IDE.
I-DVDStyler, isicelo sokwenza iiDVD zobungcali
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiDVDStyler. Ngesi sixhobo sinokwenza iiDVD zobungcali kubuntu bethu.
I-LosslessCut, isixhobo esilula sokusika iividiyo zakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiLossLessCut. Lo ngumhleli wevidiyo olula kakhulu oya kusivumela ukuba senze izinto ezisisiseko.
Indlela yokuba neTrello kwidesktop yethu Ubuntu
Isifundo esincinci sendlela yokufikelela ngokuthe ngqo kwi-Ubuntu desktop yethu kwisicelo seTrello kwaye ke siphucule imveliso kwiPC yethu ...
Ddgr, khangela kwi-Ubuntu kwi-DuckDuckGo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-ddgr. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sikhangele kwisiphelo sethu kwiDuckDuckGo.
Imenyu eBrisk, enye indlela kwimenyu yeklasikhi
Imenyu eBrisk sisicelo seMenyu esinceda ukuba sikhumbule iMenyu yokuQala yeWindows. Imenyu efanelekileyo yabo bavela kwiWindows ...
Inboxer, umxhasi weGmail ongekho semthethweni ku-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Inboxer. Le ngumxhasi we-desktop we-Gmail ongafanelekanga kwi-Ubuntu 17.10.
I-Bashhub, fikelela kwimbali yesiphelo sakho naphina
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iBashhub. Ngesi sixhobo sinokufikelela kwimbali yesiphelo sethu naphi na.
Ungayihlaziya njani iLinux Mint 18.2 ukuya kwiLinux Mint 18.3
Abasebenzisi abaninzi basebenzisa iLinux Mint kwaye oko kuthetha ukuba uninzi kufuneka ...
Ukuhanjiswa kwefayile ye-Android, ukuhambisa iifayile phakathi kwe-Android kunye ne-Ubuntu 17.10
Kule nqaku siza kujonga ukuGqithisela iFayile ye-Android yeGnu / Linux. Singadlulisa iifayile kunye neefolda phakathi kwe-Android kunye ne-Ubuntu yethu.
Iindlela ezi-3 zasimahla kuMshicileli weMicrosoft ka-Ubuntu 17.10
Sinikezela ngezixhobo ezithathu zasimahla esinokuzifaka ku-Ubuntu 17.10 kwaye ezizezinye ezinokushicilela uMicrosoft, ukhetho olukhethekileyo ...
Mkusb, buyisela iidrive ezonakalisiweyo ze-USB okanye amakhadi kwimeko yawo yoqobo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-mkusb. Ngale sicelo sinokwenza i-usb esebenzayo kwaye sibuyisele ipeni kwixabiso laso loqobo.
Umhlaba wombungu uJim 1 kunye no-2 bafika ngokusemthethweni ku-Ubuntu
I-saga yomdlalo wevidiyo odumileyo, uMhlaba uMhlonyane, ekugqibeleni ufika kwi-Ubuntu kunye neGnu / Linux. Ngeli xesha enkosi kwiqonga lomdlalo wevidiyo weGoG ...
Umdlali weQmmp uhlaziywa kuhlobo lwayo lwe-1.2.0
Ngeli xesha ndiza kukuxelela malunga neQmmp esisidlali somsindo esine-multiplatform ebhalwe kwi-C ++, ine-interface efana ne-Winamp
Izandiso zeGnome, ezinye izicelo ezinomdla ze-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ezinye izandiso zeGnome ukubonelela ngo-Ubuntu 17.10 ngokusebenza ngakumbi.
XnConvert, retouch kunye nenkqubo yemifanekiso emininzi kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-xnConvert. Le nkqubo iya kuba luncedo kuthi xa siphinda sisebenzisa imifanekiso emininzi ngaxeshanye.
I-devRantron, umxhasi we-desktop ongekho semthethweni kuluntu lwe-devRant
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-devRantron. Le ngumxhasi we-desktop ongekho mthethweni kwinethiwekhi ye-DevRant.
ISupertuxkart ipapasha ingxelo yayo yokugqibela engu-0.9.3
Kule fakelo intsha yeSupertuxkart inguhlobo lwayo lokugqibela oluzinzileyo lwe-0.9.3 sifumana umsebenzi omtsha omkhulu, osisakhono sokurekhoda.
ICanonical ifuna ukwazi ukuba ufuna ukuba iseva yakho ye-MIR ibe njani
Abaphuhlisi be-MIR bayaqhubeka ukuqhubela phambili emsebenzini wabo kwaye ngoku bafuna ukwazi ukuba yeyiphi imisebenzi okanye iimodyuli ozifunayo kwiseva yabo yemizobo ...
qBittorrent 4.0, inguqulelo entsha yalo mthengi wesifudula Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokufaka i-qBittorrent 4.0.1 kwi-Ubuntu ngokulula nangokukhawuleza.
Uyifaka njani i-ADB kunye ne-Fastboot kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokufaka i-ADB kunye ne-Fastboot kwi-Ubuntu 17.10 yethu ukuze sikwazi ukuphuhlisa kunye nokufaka ii -apps ze-Android nakweyiphi na iselfowuni ...
Wpm, linganisa isantya sakho sokubhala kwisiphelo se-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iWpm. Le nkqubo incinci iya kusivumela ukuba silinganise kwaye siphucule isantya sokubhala kwethu ku-Ubuntu.
I-LXLE 16.04.3, inguqulelo yamvanje yosasazo olunobunzima
I-LXLE 16.04.3 yinguqulelo entsha yosasazo olulula olusebenzisa Ubuntu Xenial Xerus njengolwabiwo lwesiseko kwaye lazise utshintsho olukhulu ...
UKubuntu unokuba nefomathi ye-snap njengefomathi emiselweyo yokufaka usetyenziso
Ifomathi ye-snap iyaqhubeka nokwanda, ngoku ifikelela kwiprojekthi ye KDE kunye nePlasma. Yiyo loo nto i-KDE Neon kunye neKubuntu iya kuba yile ilandelayo ibe nale fomathi ichazwe kwangaphambili ...
Ubuntu Unity Remix, igama lencasa elitsha elisemthethweni?
Ngokucacileyo incasa entsha yobuntu esekwe kuBumbano isondele ngakumbi kunangaphambili. Ubuntu Unity Remix ligama lethutyana loluhambisa ...
Ungayifumana njani imifanekiso ye-Ubuntu 18.04 kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokufaka kunye ne-Ubuntu 17.10 ipakethe entsha ye-Ubuntu 18.04, ii icon ezibizwa ngokuba yiSuru ...
Uyenza njani Ubuntu 16.04 yokuhlaziya ngokuzenzekelayo
Icebo elincinci lokwenza uhlaziyo lwethu lwe-Ubuntu 16.04 ngokuzenzekelayo, ukuze singabinangxaki zokhuseleko okanye iinkqubo eziphelelwe lixesha ...
IMozilla Firefox 57, inguqulelo entsha eya kuphucula ukusebenza kweBuntu
IMozilla Firefox 57 iyafumaneka ngoku. Inguqulelo entsha yesikhangeli sewebhu sikaMozilla ngoku sinokufakwa ku-Ubuntu kwaye ke sinesikhangeli sewebhu
Susa intengiso yeSpotify, ku-Ubuntu 17.10 ngendlela elula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokususa intengiso kumthengi wethu weSpotify kwi-Ubuntu 17.10
I-Papis, umgca wemiyalelo esekwe kwibhayibhile kunye nomphathi woxwebhu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPapis. Esi sixhobo luxwebhu lomyalelo kunye nomphathi wencwadi.
Android Studio 3.0, yifake kwi-PPA kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singayifaka njani Android Studio 3.0 ukusuka kwi-PPA kwi-Ubuntu 17.10 yethu.
Fli, ulwazi olukhawulezayo kwiidilesi ze-IP, ii-imeyile kunye nokunye
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuCli.Fyi. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba sinike ulwazi olukhawulezayo kwidatha eyahlukileyo esuka kwikhonsoli.
Iinguqulelo zemihla ngemihla zokuqala ze-Ubuntu 18.04 ngoku ziyafumaneka
Iqela lophuhliso lwe-Ubuntu 18.04 likhuphe iinguqulelo zokuqala zemihla ngemihla zokukhutshwa okuzinzileyo kwe-Ubuntu. Inguqulelo eya kufika ngo-Epreli
I-OProfile, ivelisa iinkcukacha zeenkcukacha manani zokusebenza ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-OProfile. Ngale software sinokuvelisa iiprofayili zamanani enkqubo yethu Ubuntu.
NBA Yiya, landela imidlalo evela kwisiphelo sendlela Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-NBA Go. Le nkqubo yesiphelo iya kusivumela ukuba sihlale sinolwazi ngemidlalo kule ligi.
Uphicotho-zincwadi 2.2, uhlaziyo olutsha lwenkqubo yesandi eyaziwayo
Uphicotho-zincwadi 2.2 luhlobo olutsha lomhleli wesandi odumileyo nowaziwayo kwihlabathi leGnu. Sikuxelela ukuba yintoni entsha ezisa kunye nendlela yokufaka kwi-Ubuntu
Umqondiso, inkonzo ekhuselekileyo yokuthumela imiyalezo kwi-Ubuntu desktop
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uMqondiso. Le yinkonzo yemiyalezo ekhuselekileyo eyenziwe kwi-electron ye-Ubuntu desktop.
U-Lucidor, umfundi we-ebook olula kwaye osebenzayo we-Ubuntu
U-Lucidor ngumfundi we-ebook omncinci osivumela ukuba sifunde iincwadana kwifomathi ye-Epub ku-Ubuntu kwaye sifikelele kumathala eencwadi kwifomathi ye-OPDS
Prestashop, yifake ngokulula ngeXampp kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka i-Prestashop kwalapha ekhaya, usebenzisa i-Xampp. Konke oku kwinkqubo Ubuntu 17.10.
I-Anaconda, isuti yeNzululwazi yeDatha kunye nePython ukusukela Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iAnaconda. Le suite yesayensi yedatha yePython ukusukela Ubuntu 17.10.
Uyiphucula njani intsebenzo Ubuntu ngenxa yeZSwap
Isikhokelo esincinci sokwazi ukuba okanye asinayo i-ZSwap ku-Ubuntu kunye nokuba senze ntoni xa singakhange siyisebenzise ukuphucula ukusebenza kwe-Ubuntu ...
I-MuseScore, i-snap-on compositing and software notation yomculo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiMuseScore. Le nkqubo iyakusinceda ngokwakhiwa nangokubhalwa komculo ku-Ubuntu.
Uyifaka njani i-Hearthstone kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokufaka kunye nokudlala i-Hearthstone kwi-Ubuntu 17.10. Isikhokelo sokudlala umdlalo ngokulula ngaphandle kokubuyela kwiWindows
Ukudlala imidlalo kwiGnu / Linux, isifundo esilula kubasebenzisi be-novice
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iindlela ezahlukeneyo zokufumana uninzi lwemidlalo yokudlala kwinkqubo yethu yoBuntu.
RipMe, khuphela ii-albhamu zemifanekiso kwiiwebhusayithi ezidumileyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iRipMe. Le nkqubo yeJava izakuvumela ukuba sikhuphele ii-albhamu zemifanekiso kwiiwebhusayithi ezidumileyo.
Cubic, yenza i-Ubuntu ISO yesiko kunye nezinto eziphuma kuzo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiCubic. Ngale nkqubo sinokwenza imifanekiso ye-ISO yesiko lethu loBuntu.
Inguqulelo yeVirtualBox 5.2 ikhutshwe ngokusesikweni
Le nguqulo intsha yeVirtualBox iza notshintsho kunye neempawu ezininzi abanokuba nomdla kuzo, oku kuyahambelana nesebe elitsha kwi ..
I-XAMPP 7.1.10, faka ngokulula le seva ku-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela esingayifaka ngayo iXAMPP 7.1.10 kwinkqubo yethu Ubuntu 17.10 ngendlela elula
Abaphuhlisi beKubuntu bacela abasebenzisi babo uncedo lokuvavanya iPlasma 5.8.8
Abaphuhlisi beKubuntu bacela uLuntu lwabo ukuba luncede ukuvavanya iiphakheji kunye nokusetyenziswa okunxulumene nePlasma 5.8.8 kwi-Ubuntu 16.04 ...
Ubuntu 18.04 LTS uphuhliso luqala ngokusemthethweni
Kule mpelaveki uphuhliso lwe-Ubuntu 18.04 LTS luqale ngokusesikweni, uguqulelo olusemthethweni noluzinzileyo luka-Ubuntu oluza kukhutshwa ngo-Epreli ...
Nasiphi na isincamathelisi, layisha zonke iintlobo zeefayile kwisiphelo sendlela ngokuzenzekelayo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singayisebenzisa njani na i-Anypaste ukwabelana ngeefayile ezivela kwisiphelo se-Ubuntu.
Uyifaka njani i-Adobe Creative Cloud kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokufaka iAdobe yokuBumba amafu kwi-Ubuntu 17.10. Inkqubo elula nekhawulezayo enkosi kwiskripthi ...
Uhamba njani ukusuka kwiWayland ukuya kwiXorg kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokubuyela kwiXorg njengeseva yemizobo kwaye ushiye iWayland ecaleni ku-Ubuntu 17.10 ukuze usetyenziso oluthile lusebenze ...
Windows Aero Flip 3D, Alt + Tab Task Switcher ku-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokwenza kusebenze iWindows Aero Flip 3D xa utshintsha imisebenzi ngeAlt + Tab kwi-Ubuntu 17.10 yethu.
UShuttleworth ucacisa ukuba kutheni Ubuntu bushiye ubunye kwiGnome
Inkokeli yeCanonical kunye noBuntu, uMark Shuttleworth ucacisile izizathu zokuba kutheni Ubuntu butshintshe ubunye beGnome, kunye nokulibala kobunye ...
Hambisa 'min, max, vala' amaqhosha efestile ngasekhohlo kwi-Ubuntu 17.10
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokuhambisa Ubuntu 17.10 amaqhosha efestile ngeGSettings kunye neDconf.
Ubuntu 18.04 izakubizwa ngokuba yi "Bionic Beaver", ngokunika imbeko kubasebenzi baka-Ubuntu
Imascot kunye nesiteketiso Ubuntu 18.04 iya kuba yiBionic Beaver, njengoko kubonisiwe nguMark Shuttleworth kwiphepha lakhe, ingxelo elandelayo iya kuba yi-LTS ...
Unobunye njani ku-Ubuntu MATE 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokujonga ubunye ku-Ubuntu MATE 17.10, isiko eliza kusivumela ukuba sikhumbule Ubuntu desktop ...
I-Cockpit, lawula kwaye ulawule inethiwekhi yakho ngokusebenzisa isikhangeli sewebhu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iCockpit. Ngale nkqubo sinokulawula ngokulula uthungelwano lweekhompyuter ezivela kwisikhangeli.
Ungabususa njani ubunye kwi-Ubuntu 17.10
Isifundo esincinci sendlela yokubususa ubunye kwi-Ubuntu 17.10 yethu ngaphandle kokushiya inkqubo yokusebenza icaphukile okanye ikhubaze umsebenzi wethu ...
IWant, yabelana ngeefayile zontanga kwi-terminal ye-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-iWant. Le nkqubo iza kuluncedo xa kufikwa ekwabelaneni ngeefayile kwinethiwekhi yethu.
Iifonti zikaGoogle, ufaka konke ku-Ubuntu ngeTypeCatcher
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iTypeCatcher. Le nkqubo iza kusinceda ukuba sifake iifonti zikaGoogle ku-Ubuntu.
I-OMD, isixhobo sokujonga inethiwekhi esipheleleyo se-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-OMD. Ngale software sinokujonga inethiwekhi yethu kwinkqubo yethu yoBuntu.
Uhlaziya njani ku-Ubuntu 17.10 ukusuka kuhlobo lwangaphambili
Isifundo esincinci sendlela yokuphucula ukuya ku-Ubuntu 17.10 ukusuka kuhlobo lwamva nje lwe-Ubuntu esinayo, kunye nokuhamba ukusuka ku-Ubuntu LTS ...
Ubuntu 17.10 sele ikhutshiwe kwaye iyafumaneka ukuze ikhutshelwe
Kule nguqulo intsha sineGnome Shell 3.26 kunye nazo zonke izinto eziza nolu hlobo lutsha lokuhambisa ...
Iindaba ezikhawulezayo, fumana iindaba kwangoko kumgca wokuyalela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-InstantNews. Oku kuluncedo kumgca wokuyalela kusinika ithuba lokufunda iindaba.
I-Elemenatary OS Juno iya kusebenzisa iiphakheji zesnap
Inguqulelo elandelayo ye-Elementary OS iya kusekelwa kwi-Ubuntu 18.04 kwaye iya kuba notshintsho olukhulu. Le nguqulo iya kuthiwa yi-Elementary OS Juno ...
IGitBook, bhala amaxwebhu eeprojekthi zakho kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iGitBook. Umhleli oya kusivumela ukuba senze uxwebhu lweeprojekthi zethu kwidesktop
SupertuxKart, zama lo mdlalo weklasikhi kwi-Ubuntu yakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSupertuxKart. Lo ngumdlalo weklasikhi kwiinkqubo zeGnu / Linux ezilingisa iSupermario Kart eyaziwayo.
Ocenaudio, zama lo mhleli weaudiyo olula kwaye usebenza kakhulu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-Ocenaudio. Esi sisihleli silula kodwa sinamandla somhleli wenkqubo yethu Ubuntu.
sView, faka lo mfanekiso wesitiriyo kunye nombukeli wevidiyo ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-sView. Singafaka lo mfanekiso wesitayile kunye nevidiyo usebenzisa iPPA ku-Ubuntu.
IFreeCAD, imodeli ye3D kunye nesoftware yeCAD Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFreeCAD. Le yimodeli ye-3d kunye ne-2d eya kuba luncedo kuthi kubunjineli boomatshini kunye noyilo lwemveliso.
Ikofu, isicelo sokwazi imozulu kunye neendaba zamva nje
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ikofu. Esi sicelo siza kusivumela ukuba sazi uqikelelo lwemozulu kunye neendaba zamva nje.
I-Mailspring, umxhasi weposi olungileyo kwi-Ubuntu yethu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuMailspring. Olu lolunye uhlobo olulungileyo kumxhasi weposi we-Nylas kwi-Ubuntu bethu.
I-DebOrphan kunye neGtkOrphan, susa iipakeji ezingasetyenziswanga Ubuntu bakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-DebOrphan kunye neGtkOrphan. Ezi zixhobo ziya kusivumela ukuba sisuse iipakeji zeenkedama ku-Ubuntu bethu.
Transfer.sh, yabelana ngeefayile ngokulula kwisiphelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiTransfer.sh. Esi sixhobo siza kusivumela ukuba sabelane ngeefayile naye nabani na esimfunayo ngesiphelo
I-Asciinema, rekhoda kwaye wabelane ngeeseshoni zakho zesiphelo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ASCIINEMA. Esi sisicelo sokurekhoda iiseshoni zakho zesiphelo kwaye wabelane ngazo nabani na ofuna.
I-Netutils-linux, izixhobo izixhobo zokusebenza kwenethiwekhi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Netutils-linux. Esi siseti yezixhobo zethu zokuphucula okanye ukulawula inethiwekhi yethu.
Uyenza njani inethiwekhi yokuncokola kunye no-Ubuntu kunye neKliqqi
Isikhokelo esincinci sendlela yokufaka i-Kliqqi kwi-Ubuntu Server, i-CMS eya kusivumela ukuba sibe nenethiwekhi encinci kwindawo yethu yewebhu ...
Zim, yenza iWiki yakho kwi-Ubuntu desktop
Kule nqaku siza kujonga iZim. Ngale software siza kuba nakho ukwenza iWiki yethu kwi-Ubuntu desktop.
I-DCRaw, guqula imifanekiso ekrwada ifomathi esemgangathweni ukusuka ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiDCRaw. Le nkqubo iya kusivumela ukuba siguqule imifanekiso eluhlaza ibe ziifomathi eziqhelekileyo (iTiff kunye nePPM).
Isidlali soMculo seNyukliya, fakela esi sidlali somculo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiNyukliya. Lo mdlali osasazayo uya kusivumela ukuba simamele umculo kwimithombo emininzi.
Uyibuyisela njani i-Ubuntu desktop kwindawo yokuqala yokufaka
Isifundo esincinci sendlela yokubuyisela i-Ubuntu desktop ngaphandle kokwenza ufakelo olucocekileyo. Iluncedo xa kuphuma uhlobo olutsha ...
I-Geary 0.12, faka ingxelo entsha yale imeyile yeposi ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iGeary. Lo mxhasi weposi ufikelele kwinguqulelo engu-0.12 kwaye sinokuyifaka ngokulula ku-Ubuntu.
I-Intellij IDEA, faka le IDE ukuphuhlisa ngeJava ukusuka kwi-PPA
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Intellij IDEA. Yi-IDE eyenzelwe ukukwazi ukuphucula iiprojekthi ngeJava kunye nezinye iilwimi ku-Ubuntu.
ICantata MPD, faka esi sidlali-mculo kwiPPA okanye kwiphakheji ye .deb
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iCantata MPD. Esi sisidlali somsindo esisebenzisa izixhobo ezincinci kwinkqubo yethu yoBuntu.
IfotoFlow, isebenza nemifanekiso yeRAW ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPhotoFlow. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sisebenze nemifanekiso yeRAW evela kwinkqubo yethu Ubuntu.
Uyifaka njani ingqinisiso ephindwe kabini ku-Ubuntu bethu
Isifundo esincinci sendlela yokufaka inkqubo yokuqinisekisa kabini kwi-Ubuntu yethu incedwe yi-smartphone kunye nokusetyenziswa okulula kukaGoogle ...
ILutris, sisixhobo sabona badlali banobuntu
ILutris sisixhobo esizama ukwenza kube lula kuthi ukufaka nokufumana imidlalo yasimahla ye-Ubuntu okanye nayiphi na inkqubo yeGnu / Linux ...
I-Twitter Cli, umxhasi we-Twitter kumgca wokuyalela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Twitter CLI. Lo ngumxhasi we-Twitter kumgca womyalelo we-Ubuntu.
I-Eolie, faka okanye uqokelele ikhowudi yesi sikhangeli sewebhu seGnome
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ku-Eolie. Esi sisikhangeli sewebhu seGnome esinokukufaka ngokulula.
I-PyCharm, faka le IDE yePython kwiPPA
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPyCharm. Le IDE emnandi yokuphuhlisa iikhowudi zePython esingazifaka kwiPPA.
IFirefox Quantum iyothusa wonke umntu
Inguqulelo ye-beta yeMozilla Firefox 57 okanye ekwabizwa ngokuba yiFirefox Quantum, sele ikhutshiwe. Le nguqulo iyamangalisa wonke umntu ngesantya sayo ...
I-beta yokugqibela ye-Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) ngoku inokukhutshelwa
I-beta yokugqibela ye-Ubuntu 17.10 ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa. Sityhila iindaba eziphambili, kunye nekhonkco lokukhuphela lomfanekiso we-ISO
Isifumisi esimangalisayo, khangela iiprojekthi kwiGitHub ukusuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Awesome finder. Ngalesi sicelo sinokukhangela iiprojekthi kwi-GitHub kwisiphelo se-Ubuntu.
I-GNU Emacs, faka lo mhleli wombhalo wasentsomini kwi-Ubuntu / Linux Mint
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iGnu Emacs. Lo ngumhleli onamandla kwaye uthandwa kakhulu esinokuthi senze nantoni na.
Ubuntu 17.10 ayiyi kuba nohlobo lwe-32-bit, kwaye kungasayi kubakho nohlobo oluzinzileyo lwe-Ubuntu
Ubuntu ayisayi kuba nohlobo lwe-32-bit. Isigqibo siya kuchaphazela kuphela uhlobo olusemthethweni lwe-Ubuntu kwaye luya kuvela ku-Ubuntu 17.10 kwaye kamva ...
IJupyter Notebook, sebenzisa kwaye ubhale iikhowudi zakho kwisikhangeli
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iJupyter Notebook. Ngale nkqubo siza kuba nakho ukwenza iikhowudi zethu zePython kwisikhangeli.
Iiapps ezifakwe kwi-Ubuntu 17.10 dock ziya kubonisa inkqubela phambili kunye nezaziso
Zonke izicelo ezifakwe kwi-Ubuntu Dock ye-Ubuntu 17.10 ziya kubonisa izaziso kunye nemivalo yenkqubela phambili kunye neempawu zazo.
Wikit, khangela iWikipedia kwi-terminal yenkqubo yakho yokusebenza
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Wikit. Esi sixhobo siza kusinceda ukuba siqwalasele isishwankathelo samanqaku e-Wikipedia avela kwisiphelo sendlela.
Indlela yokusombulula "Olu hlobo lwe-Skype alusasekelwa" kwi-Skype yethu naku-Ubuntu
Isikhokelo esincinci kunye nezisombululo zempazamo evela kwi-Skype ebonisa "Olu hlobo lwe-Skype alusasekelwa" ukuba luhlobo lwamva nje lwenkqubo
I-PiTiVi, fakela iphakheji yeflakpak yalo mhleli wevidiyo olula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokufaka iPiTiVi flatpak package. Lo ngumhleli wevidiyo olula kodwa onamandla.
IPlasma 5.11 iza Kubuntu 17.10 njengohlaziyo
Inguqulelo elandelayo yePlasma, iPlasma 5.11, iya kubakho eKubuntu 17.10 ngenxa yohlaziyo lokuba iqela leKubuntu liya kukhupha iiveki kamva ...
I-SeaShells, bonisa i-terminal yakho kuye nakubani na ngexesha lokwenyani ngewebhu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-SeaShells. Ngale nkqubo unokwabelana ngesiphelo sakho ngexesha lokwenyani ngewebhu.
I-FlightGear, fakela le simulator yendiza ngokulula kwiPPA
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFlightGear. Lo ngumthombo ovulekileyo wokuvula inqwelomoya we-Ubuntu.
I-localtunnel, yenza ukuba iseva yakho yengingqi ifikeleleke kwi-intanethi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Localtunnel. Le nkqubo iza kusinceda ukuba senze ukuba umncedisi wethu wasekhaya afikeleleke kwi-intanethi.
I-SoCLI, yenza imibuzo eStack Overflow evela kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSoCLI. Le yinkqubo eya kusivumela ukuba senze imibuzo kwi-Stack Overflow evela kwi-terminal.
Ubuntu kunye neMicrosoft benza i-kernel eyenzelwe i-Azure
IMicrosoft kunye neCanonical ikhuphe i-kernel elungiselelwe Ubuntu kwiMicrosoft Azure, iseva yelifu kaMicrosoft ...
Iinkqubo ezi-3 esinokuzisebenzisa ku-Ubuntu ukwenza ii-podcast zethu
Sithetha ngeenkqubo ezintathu ezilungileyo ezikhoyo ze-Ubuntu ukwenza kunye nokuhlela ii-podcast. Into ehamba ngaphaya kweTunes okanye irediyo elula ...
Umphathi weendaba, funda ukutya kwakho kwikhonsoli ngendlela elula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiNewsbeuter. Esi sisicelo sokukwazi ukufunda i-RSS / Atom feed ukusuka kwikhonsoli.
Ubungozi beBlueborne babukhatshwa kuzo zonke iinguqulelo ze-Ubuntu
Abasebenzisi bazo zonke iinguqulelo ze-Ubuntu kufuneka bahlaziye iinkqubo zabo ngokukhawuleza ukukhusela ngokuchasene nobungozi beBlueBorne.
I-Mir 1.0 iya kufumaneka kwi-Ubuntu 17.10
Iseva yemizobo yeCanonical, iMir, iya kuba kwi-Ubuntu 17.10. I-Mir version 1.0 iya kufumaneka kwaye iya kuhambelana nezinye iiseva zemifanekiso ...
Jonga, fumana yonke into oyifunayo kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiSurfraw. Olu nxibelelaniso luya kusivumela ukuba sikhangele iinjini ezininzi zokukhangela kunye neewebhusayithi ezivela kwisiphelo sendlela.
IFirefox, iThunderbird kunye neVLC zezona zixhobo zidumileyo phakathi kwabasebenzisi baka-Ubuntu
Uvavanyo olwenziwe yiCanonical luveza ezonaapps zidumileyo phakathi kwabasebenzisi baka-Ubuntu, ezinokubonakala ngokungagqibekanga kwinkqubo yokusebenza.
Uyifaka njani i-JDK kwi-Ubuntu 17.04
Isikhokelo esincinci sendlela yokufaka kunye nokumisela iJava JDK kwi-Ubuntu 17.04. Isixhobo esibalulekileyo okanye esibalulekileyo sabaphuhlisi beJava
Thatha ngokwakho, yabelana ngesiphelo sakho nangaye nabani na
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uTmate. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sabelane ngesiphelo sethu naye nabani na.
Umsele, ukhangele kwaye ukhuphele iifayile kwiifayile
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iTorrench. Esi sisicelo sesiphelo apho unokukhangela kunye nokukhuphela iifayile ezikhukulayo.
Krop, faka isixhobo sokucoca iifayile zePDF ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iKrop. Le nkqubo iyakusinceda ukusika iifayile zethu zePDF ku-Ubuntu.
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-zzupdate. Le nkqubo yesiphelo iya kusivumela ukuba sihlaziye Ubuntu bethu ngomyalelo omnye.
Isikhokelo esincinci kukhetho esinokuthi silutshintshe ubumbano lwethu oludala okanye iGnome kwiidesktophu zokukhanya, iidesktops esinazo ku-Ubuntu 17.04 ...
ExifTool, funda okanye usebenzise imethadatha yeefayile zakho kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-ExifTool. Le nkqubo iya kuvumela ukufunda okanye ukuguqula imethadatha yeefayile ezivela ku-Ubuntu.
ISynfig Studio, isoftware enamandla yoopopayi kunye neSoure evulekileyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSynfig Studio. Le software ye-2D yoopopayi esinokuthi senze ngayo oopopayi abaqeqeshiweyo.
I-RawTherapee, engeyiyo eyonakalisayo emva kokuveliswa kweefoto
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiRawTherapee. Esi sisicelo sokuphuhlisa imifanekiso yeentlobo ezininzi.
S-tui, ngokulula jonga i-CPU ukusuka kwisiphelo sendlela
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-s-tui. Esi sixhobo siza kusinceda ukubeka esweni ukusetyenziswa kwe-CPU ukusuka kwisiphelo sendlela.
INetdata, jonga iimetrikhi zoBuntu bethu ngexesha lokwenyani
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiNetdata. Ngale daemon siya kuba nakho ukubeka esweni iimetrikhi ngexesha lokwenyani lenkqubo yethu yoBuntu
Uyifaka njani iKotlin kwi-Ubuntu 17.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka ulwimi lwenkqubo yaseKotlin ku-Ubuntu 17.04 kwaye ukwazi ukwenza usetyenziso olunolu lwimi ...
Iiphakheji ze-Ubuntu snap ziya kusebenza kwi-Android
Emva kohlaziyo lokugqibela lwetekhnoloji yeephakeji ze-snap, ezi ziyahambelana nesiqalo se-Android, ukuba linyathelo lokuqala kwikamva ...
I-OBS Studio, ukurekhoda kunye nokusasaza bukhoma iividiyo ezivela kwidesktop
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-OBS Studio (Isoftware evulekileyo yoSasazo). Ngayo sinokusasaza iividiyo zethu kuthungelwano oluvela ku-Ubuntu.
I-Cryptomator, isoftware esecaleni yabathengi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Cryptomator. Le software yokubhala ngokufihlakeleyo kwicala lomxhasi esinokuthi siyisebenzise ku-Ubuntu.
I-Trigger Rally, umdlalo ovulekileyo womthombo woBuntu kunye neziphumo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiTrigger Rally. Lo ngumthombo ovulekileyo womdlalo wamaqela anezixhobo ezisezantsi zehardware.
Natron, umthombo ovulekileyo emva kwesoftware yokuqamba isoftware
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uNatron. Esi sisiqalo esivulekileyo somthombo emva kwesoftware yokuqamba isiphumo
Gifcurry, yenza ii-GIF zakho zoopopayi kwividiyo ngokulula
Kule nqaku siza kujonga kwi-Gifcurry. Le yinkqubo esinokuthi ngayo senze ii-GIFs zoopopayi kwiividiyo ezivela ku-Ubuntu.
Ubuntu 17.10 (Artful Ardvark) iya kuba nenkxaso kuyo yonke imigangatho yokushicilela engaqhubi
Ubuntu 17.10 iya kuthumela nge-GNOME 3.26 kwimo engqongileyo yedesktop kwaye iya kuba nenkxaso ngokungagqibekanga kwabona baprinta banamhlanje.
Uyifaka njani iDconf kwi-Ubuntu 17.04
I-DConf sisixhobo esilula kodwa esinamandla sokwenza ngokwezifiso esinendawo ye-Gnome kunye nazo zonke izinto ezivela kuyo kwaye sinokuyifaka kwi-Ubuntu 17.04 ...
IPolyBrowser, isikhangeli sewebhu sokhangelo lwepanoramic
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiPolyBrowser. Eyona nto iphambili kwisikhangeli sewebhu isinika ukukhangela indawo ebanzi.
I-Minecraft ekugqibeleni iza ku-Ubuntu kodwa umhla wokukhutshwa awaziwa
Abaphuhlisi abaninzi beMinecraft babuqinisekisile ubukho beMinecraft yevidiyo yomdlalo weGnu / Linux kodwa umhla wokukhutshwa kwayo awaziwa.
Uluhlu lwezikhangeli ezi-5 ezilula, ezilungele oomatshini abanezixhobo ezimbalwa okanye ukuba sifuna ukusebenzisa kancinci inkqubo yethu xa sikhangela.
I-UniCenta oPOS, indawo yokuthengisa evulekileyo yeshishini lakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-UniCenta oPOS. Lo ngumthombo ovulekileyo we-POS ngaphandle kwemida yelayisensi.
I-beta 1 yeencasa ze-Ubuntu 17.10 ezisemthethweni ngoku ziyafumaneka
I-beta yokuqala yeencasa ze-Ubuntu 17.10 ezisemthethweni ngoku ziyafumaneka kuye wonke umntu. Ezi nguqulelo zicokisa kwaye zibonise into entsha kuhlobo ngalunye ...
I-MySQL Workbench, isixhobo esibonakalayo sokuyilwa kwedatha
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-MySQL Workbench. Le nkqubo iyakusivumela ukuba siphucule imizobo yolwazi.
Nload, inkqubo yesiphelo esilawula ukugcwala kwenethiwekhi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-nload. Ngalesi sicelo sesiphelo sinokulawula ukugcwala kwenethiwekhi yethu.
I-3D yekhaya elimnandi, yenza uyilo lwangaphakathi ngendlela elula
Kule nqaku siza kujonga kwi-3D yasekhaya eyiSwiti. Ngale sicelo sinokuyila ngaphakathi kwi-3D ngendlela elula esuka kwi-Ubuntu.
Isikhangeli seYandex, isikhangeli sewebhu esingasasebenziyo esivela eRashiya
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiYandex Browser. Esi sikhangeli sewebhu esilula esivela eRussia senkqubo yethu Ubuntu.
Sandman, uncedo lokuvelisa ngakumbi phambi kwekhompyuter
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uSandman. Esi sisicelo esiya kusinceda ukuba sihlale sitsha xa sisebenza phambi kwePC.
Uyifaka njani iFalkon kwi-Ubuntu 17.04, eyayisaziwa njengeQupZilla
Inqaku elincinci lendlela yokufaka isikhangeli sewebhu seFalkon, isikhangeli sewebhu seProjekthi ye KDE esekwe kwiQupzilla ...
I-Selene Media Converter 17.7, isiguquli semultimedia yoBuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kubona indlela yokufaka uSelene Media Converter 17.7. Isiguquli semultimedia sinokusinceda ku-Ubuntu bethu.
Uyisebenzisa kanjani iXfwm4 kwi-Ubuntu MATE
Isifundo esincinci sendlela yokufaka okanye yokutshintsha Ubuntu MATE umphathi wewindows kumphathi weXfwm4, umphathi wefestile yeXubuntu ...
Ungqamaniso lwe-DAEMON, vumelanisa iifayile zakho kwi-Android okanye kwi-IOS ene-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-DAEMON Sync. Ngayo sinokuvumelanisa iifayile zethu ze-Android okanye ze-IOS ngobuntu bethu.
Uyifaka njani i-Apache Cassandra kwi-Ubuntu 17.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka i-Apache Cassandra kwi-Ubuntu 17.04, indawo ebalulekileyo yedatha kunye nesixhobo se-Ubuntu Server kunye nabasebenzisi bayo ...
Umhleli wombhalo omncinci, umhleli wokubhaliweyo osetyenziswayo ngokulula
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Micro Text Editor. Oku kulula ukusebenzisa umhleli wokubhaliweyo kwisiphelo sendlela Ubuntu.
Ngaba unazo iingxaki zokuxhomekeka ku-Ubuntu? Fumanisa ukuba zisonjululwa njani, ngakumbi ukuba unengxaki ekufakweni kweflash
Umdlali ophicothayo 3.9, isidlali somculo esingasindiyo Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kumdlali ophicothayo. Esi sidlali-mculo sifikelele kuguqulelo lwaso 3.9.
IMellowPlayer, isidlali simahla somculo esikwi-intanethi
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iMellowPlayer. Lo ngumdlali oya kusivumela ukuba sifumane umculo kwiinkonzo ezahlukeneyo ze-Intanethi.
Umhleli wombhalo weXed, indawo yeGedit egqibeleleyo yoBuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Xed Text Editor. Lo ngumhleli wokubhaliweyo opheleleyo onokuthi ube yindawo efanelekileyo yokubuyisela i-gedit ku-Ubuntu.
Yintoni omele uyenze emva kokufaka Ubuntu 16.04 LTS
Yintoni omele uyenze emva kokufaka Ubuntu 16.04? Sikuxelela amanyathelo alandelayo omele ukuwathatha emva kokufaka olu hlobo lobuntu kwiPC yakho.
I-Fotowall 1.0 'Retro', yenza imvelaphi, iikholaji, izimbozo, njl ... kunye nemifanekiso yakho
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iFotowall 1.0 'Retro'. Iya kusivumela ukuba sitshintshe, sinike iziphumo kwaye siququzelele imifanekiso yethu.
I-Citra: Umthombo ovulekileyo weNintendo 3DS
I-Citra ngumthombo ovulekileyo we-Nintendo 3DS emulator ebhalwe kwi-C ++, enelayisensi phantsi kwe-GPLv2. Le enomzami wokulungisa iye yaphuhliswa engqondweni ...
Uyifaka njani ilogo yoBuntu kwisiphelo sendlela
Isifundo esincinci sendlela yokwenza isiphelo sendlela sobuntu bethu, ukongeza uphawu lwe-Ubuntu kwikhowudi ye-ASCII ekuqaleni kwesiphelo ngasinye ...
I-Bookworm, incwadi ye-ebook enoyilo olulula kwaye kulula ukuyisebenzisa
Kule nqaku siza kujonga i-Bookworm. Lo mfundi we-ebook olula uya kusinika uyilo olulula kunye nokulula kokusebenzisa.
Isikhangeli sePale Moon, fumana okungcono kwesi sikhangeli
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga isikhangeli seNyanga yePale. Esi sikhangeli somthombo ovulekileyo siza kusinika amava amnandi.
Uyifaka njani iQmmp kwi-Ubuntu 17.04
I-Qmmp ngumdlali womculo okhanyayo nonamandla ofana nomdlali wasentsomini weWinamp. Lo mdlali unokufakwa kwi-ubuntu 17.04
I-Shotcut Video Editor, umhleli wevidiyo ovulekileyo kunye nenkxaso ye-4K
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iShotcut Video Editor. Le nkqubo yesoftware yasimahla iya kusivumela ukuba senze iimontage zevidiyo.
Uyifaka njani kwaye uyiqwalasele njani iSamba kwi-Ubuntu 14.10
Uyifaka njani kwaye uyiqwalasele njani iSamba ku-Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn yokwabelana ngefolda yoluntu (ukufikelela okungaziwa) kunye nenye ngokufikelela kwephasiwedi.
Uyifaka njani i-tar.gz kwi-Ubuntu 16.04 LTS
Ngaba ufuna ukufaka i-tar.gz kwaye ungazi ukuba ungayenza njani? Ngena kwaye ulandele amanyathelo kwesi sifundo silula apho sichaza inyathelo ngenyathelo ngendlela yokwenza.
IMixxx, ikhonsoli yokuxuba eyenziwe ngesoftware ye-DJ yasimahla
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga uMixxx. Esi sisidibanisi sesoftware simahla sayo nayiphi na i-DJ ephambili okanye enomdla.
I-CodeLite, i-IDE elungileyo yokuphuhlisa iikhowudi zakho ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iCodeLite. Ngale IDE siya kuba nakho ukuphuhlisa iikhowudi zethu ze-C, C ++, PHP, njl.njl.
Uyiphucula njani i-Ubuntu LTS kwi-Ubuntu 16.04
Isikhokelo esincinci sendlela yokuhlaziya Ubuntu LTS ku-Ubuntu 16.04, inguqulelo elandelayo ye-LTS eya kukhutshwa ngomso kuluntu ngokubanzi ...
Ungayibeka njani ibar yesixhobo ezantsi kwi-Ubuntu 16.04
Sikubonisa indlela yokubeka i-toolbar phantsi kwe-Ubuntu, ukhetho olusisiseko olungasoloko lukhona. Ngaba uyazi ukuba uyibeka njani ibar phantsi?
Buka, zilawule ngokufanelekileyo iincwadi zakho ze-e ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iBuka. Lo ngumfundi we-eBook omangalisayo kunye ne-PDF port eya kusenza sikwazi ukufunda kakuhle kwi-Ubuntu.
Ngaba i-PC yakho Ubuntu ayibaleki ngokukhawuleza okanye igudile ngendlela othanda ngayo? Ukukhawulezisa Ubuntu ngala maqhinga kulula kwaye kubuyisa ubungqongqo kunye nokuqaqamba kwikhompyuter yakho.
Spaghetti, skena ukhuseleko kwizicelo zakho zeWebhu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Spaghetti web application yezokuhlaziya ukhuseleko. Yinkqubo elula kakhulu yokusetyenziswa.
Uyifaka njani iNemo 3.4 kwi-Ubuntu 17.04 okanye Ubuntu 16.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka i-Nemo 3.4 kwi-Ubuntu 17.04 okanye Ubuntu 16.04, umphathi wefayile elula kwaye esekwe kwiNautilus kodwa ngaphandle kokufaka iCinnamon ...
Umhleli wegrafu weEd, yenza iintlobo ezahlukeneyo zemizobo evela ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iEd Graph Editor. Ngale nkqubo sinokwenza iintlobo ezahlukeneyo zemizobo evela ku-Ubuntu.
Inkomfa ye-UbuCon enikezelwe ku-Ubuntu iya kuqhubeka eParis ukusuka nge-8 ukuya kwi-10 kaSeptemba
Umnyhadala wesibini we-UbuCon Europe, inkomfa enikezelwe kuluntu lwase-Europe Ubuntu, izakubanjwa nge-8-10 kaSeptemba eParis.
Uyenza njani i-Xubuntu 17.04 okanye i-Xfce kwi-Ubuntu 17.04
Isifundo esincinci sendlela yokwenza iXubuntu 17.04 okanye iXfce ibe Ubuntu 17.04. Isikhokelo esisisiseko sokwenza oku kukhanya ngokusesikweni kobuntu ...
I-Makehuman 1.1.1, yenza kunye nemodeli yabantu be-3D ku-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuMakehuman 1.1.1. Ngale nkqubo sinokwenza kwaye sibonakalise abantu kwi-3D kwi-Ubuntu yethu.
Iindlela ezi-3 zasimahla zokufikelela kwiMicrosoft Ubuntu
Isikhokelo esincinci kwizinto ezintathu zasimahla zokufikelela kwiMicrosoft. Isiseko sedatha seMicrosoft asikho ku-Ubuntu kodwa sinokusebenzisa ezinye iindlela
I-Inkscape 0.92, iindlela ezintathu zokufaka lo mhleli wegraphic vector
Kule nqaku siza kujonga kwi-Inkscape 0.92 vector graphics editor. Ngayo sinokwenza iilogo zethu kunye nabanye.
Ubuntu Dock, isixhobo esitsha sedesktop kwi-Ubuntu 17.10
Ubuntu Dock ligama ledokodo elitsha uBuntu 17.10 oya kuba nalo ngokungagqibekanga. Le nqanawa yimfoloko yeDash ukuya kwiDock eguqulwe ngu-Ubuntu ...
Umqhubi wemizobo ye-AMDGPU-Pro 17.30 ukhupha inkxaso kwi-Ubuntu 16.04.3 LTS
Umqhubi wemizobo emitsha ye-AMD yeLinux, ebizwa ngokuba yi-AMDGPU-PRO 17.30, izisa inkxaso kwinkqubo entsha yokusebenza ye-Ubuntu 16.04.3 LTS.
Uyidlala njani imidlalo yePSP kwi-Ubuntu 17.04
Sichaza indlela yokusebenzisa kunye nokufaka i-emulator ye-Sony PSP yevidiyo kwi-Ubuntu 17.04. Indlela esebenzayo yokuba nemidlalo yevidiyo enamandla
Mps-youtube, dlala kwaye ukhuphele iividiyo zeYouTube kwisiphelo sendlela
Kule nqaku siza kujonga i-Mps-youtube. Ngale sicelo sinakho ukukhangela, ukudlala okanye ukukhuphela iividiyo kwiYouTube kwisiphelo sendlela.
Umdlali wePowder 1.10, umxhasi wevidiyo yomxhasi wevidiyo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iPowder Player 1.10. Esi sisidlali sevidiyo seTorrent somthengi seBuntu.
Umhleli weFotoxx, inkqubo yokuhlela imifanekiso kwi-Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kumhleli weFotoxx. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sihlele kwaye silungise imifanekiso ngokulula ku-Ubuntu.
Uyenza njani i-Ubuntu bootable ye-USB kwi-Mac nakwiWindows
Ngaba uyafuna ukwenza iBootable USB kwiWindows okanye iMac kwaye awazi ukuba njani? Sikubonisa indlela yokufaka Ubuntu kwi-USB nge-USB ebukhoma.
I-QOwnNotes, ukuvumelanisa ne -Cloud / Nextcloud kunye nenqaku lokuvelisa
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwiiQownNotes. Le yinkqubo elula esinokuthi ngayo senze amanqaku ethu kwaye siwalawule.
I-Raspberry Pi 2, iKernel 4.13, iBhokisi eyiyo… Ubuntu Kernel Iqela ligcina lisebenza nzima
Iqela le-Ubuntu Kernel liyaqhubeka nokusebenza nzima. Ayisebenzi nje kuphela ekuziseni i-kernel 4.13 ku-Ubuntu 17.10 kodwa ikwenzela uPi 2 uphuhliso
Magic Wormhole, thumela iifayile ngokukhuselekileyo kwi-terminal
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kuMlingo Wormhole. Ngale nkqubo ye-CLI singathumela iifayile ngokukhuselekileyo phakathi kweekhompyuter.
Uyifaka njani iManokwari kwi-Ubuntu 16.04
IManokwari sisiko okanye ujongano lweGnome. Ujongano olunokwenza iGnome ibe ngumhlobo kubasebenzisi abashiya umanyano ...
ILollypop, esinye isidlali somsindo seBuntu kunye neziphumo
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga eLollypop. Esi sisidlali somculo kwiinguqulelo ezahlukeneyo zoBuntu kunye neziphumo.
I-RPCS3: I-PS3 Game Emulator kwi-Ubuntu
I-RPCS3 ngumthombo ovulekileyo wokumisela kunye nokulungisa ingxaki ebhalwe kwi-C ++ yeWindows neLinux. I-emulator iyakwazi ukuqala kunye nokudlala amakhulu emidlalo.
Bhala! Isicelo sijolise ekufumaneni eyona mveliso inokwenzeka xa sibhala. Ukubonelela ngendawo engenaziphazamiso zombhali oqeqeshiweyo
Ukuba ufuna ukufaka iLinux Mint, ngekhe wazi ukuba kungcono ukuyenza kwi-USB. Kule posi siza kuchaza oku nokunye okuninzi.
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iRambox. Esi sisicelo esinokuthi sisebenzise kuzo zonke iinkqubo zethu zemiyalezo.
IMicrosoft Office yoBuntu, into engacingekiyo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ngaba uyazi ukuba ungayifaka njani iOfisi ku-Ubuntu okanye kwiLinux? Ngena kwaye siza kukucacisela inyathelo ngenyathelo.
Ungayifumana njani iFirefox 57 kwi-Ubuntu 17.04
Isifundo esincinci sendlela onaso kunye nokuvavanya ingxelo entsha yeMozilla Firefox, Firefox 57, kwi-Ubuntu 17.04, uguqulelo oluzinzileyo lwamva nje lwe-Ubuntu ...
Ubunsys, uqwalaselo oluphambili lweBuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Ubunsys. Le yinkqubo eya kuthi isinike ukufikelela kulungelelwaniso oluphambili lwe-Ubuntu.
Ubuntu 17.10 iya kuba nedoksi entsha, kodwa akukho Dash To Dock
Iqela le-Ubuntu liqinisekisile ubukho bedock entsha kwi-Ubuntu 17.10. Idokethi eya kunceda umsebenzisi ukuba agcwalise ukungabikho kobunye ...
IVidCutter 4.0, umhleli osisiseko wevidiyo ekulula kakhulu ukuyisebenzisa
Kule nqaku siza kujonga iVidCutter. Lo ngumhleli olula oya kusivumela ukuba senze izinto ezilula ngeevidiyo zethu.
I-Alpha 22 0 AD ngoku iyafumaneka
I-0 AD liqhinga lokwenene lomdlalo wevidiyo. Umdlalo uphindaphinda ezinye zeemfazwe eziphambili kwimbali yamandulo. Uvala ixesha eligqityiweyo.
Thumela iFirefox, thumela iifayile ezinkulu kunye nokuzitshabalalisa
Kweli nqaku siza kujonga kwinkonzo entsha yeMozilla ebizwa ngokuba yi-send. Oku kuya kusinika amandla okuthumela iifayile ukuya kuthi ga kwi-1GB.
Ngoku iyafumaneka Ubuntu 16.04.3 LTS, uhlaziyo lokugqibela olukhulu lwenguqulo yeLTS
Inguqulelo yesithathu yokugcinwa kwe-Ubuntu LTS sele ikhutshiwe, oko kukuthi, Ubuntu 16.04.3, inguqulelo ehlaziya ukuhanjiswa kwesoftware ezinzileyo
Khalisa, ukhuseleko kunye nemfihlo kwiincoko zakho
Kule nqaku siza kujonga kwiqonga lonxibelelwano leRing. Ibeka ugxininiso olukhethekileyo ekuphuculeni ubumfihlo nokhuseleko.
Ubuntu 17.10 iya kutshintsha ulawulo lwefestile
Inguqulelo entsha yoBuntu, Ubuntu 17.10 iya kutshintsha ulawulo lwefestile. Oku kuyakubangela ukuba ubungakanani obukhulu kunye nokuvala butshintshe indawo ...
I-RTV (iReddit Terminal Viewer), khangela iReddit kwikhonsoli
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga i-RTV (iReddit Terminal Viewer). Lo ngumxhasi wekhonsoli esinokuhamba ngayo kwiReddit.
Uyifaka njani iLibreOffice 5.4 kwi-Ubuntu 17.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka uhlobo lwamva nje lweLibreOffice 5.4 ku-Ubuntu. Kule meko kuhlobo oluzinzileyo luka-Ubuntu ...
IHarmony, mamela umculo wakho naphi na
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga eHarmony. Esi sisidlali somculo onokuthi udlale ngaso umculo weenkonzo zakho ezikwi-Intanethi
Fumana i-Ubuntu Budgie 17.10 yamaphephadonga
Ubuntu Budgie kunye noluntu lwayo lenze ukhuphiswano lokukhetha amaphephadonga amatsha okanye imvelaphi yedesktop yenguqulo elandelayo kwaye aba ngabaphumeleleyo
Sebenza ngeefayile zePDF kunye ne-DjVu ngeGscan2pdf 1.8.4 kwi-Ubuntu
Kule nqaku siza kujonga kwi-gscan2pdf. Le nkqubo izakusivumela ukuba sisebenze kwiifayile ze-.pdf kunye nee-DjVus ngendlela elula ku-Ubuntu.
Ubuntu Budgie 17.10, uguqulelo oluya kuxhomekeka kancinci kwiGnome
I-alpha ka-Ubuntu Budgie 17.10 yesibini iyafumaneka kuye wonke umntu. Inguqulelo entsha isibonisa ezinye iindaba malunga nencasa entsha yobuntu ...
Umenzi wezilwanyana we-OpenToonz, yenza oopopayi be-2D kwi-Ubuntu
Kule nqaku siza kujonga kwi-OpenToonz. Le yinkqubo esinokwenza ngayo oopopayi be-2D kwi-Ubuntu bethu.
Pop! _OS, ukuhanjiswa kweNkqubo76 entsha kuya kusebenzisa Ubuntu 17.10 njengesiseko
Inkqubo76 iqhubela phambili nokusasazwa kwayo kwePop! _OS. Ulwabiwo olutsha luya kusekelwa kwi-Ubuntu 17.10 kunye ne-Elementary OS, ukulungiselela ukusetyenziswa kwayo ngabasebenzisi ...
mtPaint, umhleli wegraphic wokuzoba ngokukhanya kwi-Ubuntu yethu
Kule nqaku siza kujonga kwi-mtPaint. Lo ngumhleli wemizobo wokuzoba ngokukhanya kufana nepeyinti yeWindows.
I-Electron kunye neNativefier ukwenza i-webapp yakho kwi-Ubuntu
Kule nqaku siza kujonga kwi-Electron. Esi sisakhelo esidityaniswe ne-nativefier esivumela ukuba senze eyethu iwebhusayithi.
Ngoku ikhona i-alpha yesibini ye-Ubuntu MATE 17.10
I-alpha yesibini ye-Ubuntu MATE 17.10 ngoku iyafumaneka, inguqulelo yophuhliso esibonisa iindaba eziza kuza nohlobo olulandelayo lwe-Ubuntu MATE
jEdit, umhleli wombhalo wasimahla weenkqubo zobuntu
Kule nqaku siza kujonga kwi-EdEdit. Lo ngumhleli wokubhaliweyo onempawu ezinomdla zokwenza umsebenzi wenkqubo.
WeChat, umxhasi we-electron wale ncoko Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-WeChat yesicelo sewebhu se-electron. Singasonwabela esi sicelo kwi-Ubuntu.
Faka iCorebird 1.5.1, umxhasi onamandla kwi-Twitter ku-Ubuntu
UCorebird, umxhasi onamandla noyilo olugqwesileyo nolunembile, ogqibeleleyo kakhulu oneempawu ezibalulekileyo, ukufundwa kwe ...
I-Wavebox, umxhasi we-imeyile Ubuntu bethu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kumxhasi we-imeyile ye-Wavebox. Ngaye sinokusebenza ngesantya esipheleleyo ngegoogle.
Ubuntu MATE ubuza nabasebenzisi bayo ukuba zeziphi iinkqubo ekufuneka zikwincasa esemthethweni
Ubuntu MATE uthathe isigqibo sokubuza abasebenzisi bayo ukuba zeziphi iinkqubo zokusebenzisa okanye ukufaka kulwabiwo, yiyo loo nto ibuzileyo malunga nomdlali wevidiyo
IFirefox 55 iya kuba yeyona nguqulo ikhawulezayo, kodwa iya kuba kwi-Ubuntu 17.10?
IMozilla Firefox 55 iya kukhutshwa ukuphela kuka-Agasti, uguqulelo lwesikhangeli sewebhu esithembisa ukuba sesona sikhawulezayo ukuza kuthi ga ngoku okanye ngoku kubonakala ...
I-Qt 5.9.1, (kunye ne-Qt Creator 4.3.1 ifakiwe) ukufakwa kwi-Ubuntu
Kule nqaku siza kujonga uhlobo lwe-Qt 5.9.1. Le phakheji ibandakanya i-QtCreator IDE esinokuthi siyisebenzise kwinkqubo yethu yoBuntu.
Ubuntu 17.10 iya kuba yinguqulelo yabucala yabucala ngakumbi
Intloko yedesika, uWill Cooke, ungenise ingxelo ngotshintsho olwenziwe kuphuhliso lwe-ubuntu 17.10, utshintsho oluza kuphucula Ubuntu ...
IikhowudiBlocks, i-IDE epheleleyo kubaphuhlisi be-C ++ ku-Ubuntu
Kweli nqaku siza kujonga iiCodeBlocks. Ngale nto ilula kwaye iyandiswa IDE ngeeplagi unokukhulisa ikhowudi ye-C ++.
Inguqulelo yamvanje yeeBhakethi ibandakanya ukuhambelana okukhulu kwimenyu yehlabathi
Iibakaki zinenguqulo entsha eyenza ukuba ihambelane ngakumbi kwiimenyu zehlabathi kodwa ikwazisa nezinye iindaba ezinomdla zokusebenza kwiwebhu
IPlex Media Server, ufakelo nge-snap kwi-Ubuntu nakwiziphumo
Kule nqaku siza kujonga i-Plex, Le yiseva yemidiya esinokuyifaka ngephakheji ye-snap ku-Ubuntu nakwiziphumo.
I-WebCatalog, ikhathalogu enkulu yezicelo zewebhu ezikwidesktop
Kule nqaku siza kujonga kwi-WebCatalog. Esi sicelo sisinika ikhathalogu enkulu yezicelo zewebhu eziza kusebenza kwidesktop.
Ubuntu ufuna ukwazi ukuba zeziphi izicelo oza kuzisebenzisa ku-Ubuntu 18.04
Ubuntu ufuna ukuba nonikezelo oluluncedo kubasebenzisi bayo. Kukucoca iinkalo ezinje ngezicelo esizisebenzisayo kwaye sizakutshintsha ku-Ubuntu 18.04 ...
I-GitKraken 2.7, umxhasi we-git owakhiwe nge-electron Ubuntu
Kule nqaku siza kujonga iGitKraken. Lo ngumthengi we-git owakhiwe nge-electron ye-Ubuntu (x64) yethu.
Ubuntu 16.10 ayisenayo inkxaso esemthethweni
Ubuntu 16.10 ayisasekelwa ngokusemthethweni. Inguqulelo ekhutshwe ngo-Okthobha ophelileyo ayisayi kuphinda ibe nohlaziyo kodwa iya kuqhubeka nokusebenza
I-MPV, isidlali sevidiyo kwisiphelo sendlela
Kule nqaku siza kujonga kumdlali wevidiyo kwisiphelo se-MPV. Siza kubona indlela yokuyifaka kunye nokuyikhupha ngendlela elula ku-Ubuntu.
Uyifaka njani i-SASS kwi-Ubuntu 17.04
Sithetha ngesifundo esincinci sokufaka i-SASS kwi-Ubuntu 17.04. Indlela elula yokuba nale projekthi yeCSS kwi-Ubuntu ...
I-AnimationMaker, yenza iividiyo zokubonisa ezivela ku-Ubuntu
Kule nqaku siza kujonga i-AnimationMaker. Sisicelo esinokuthi ngokulula senze iividiyo zokubonisa ku-Ubuntu.
Inkqubo entsha ye-Skype izisa iiFowuni zeVidiyo ku-Ubuntu
Isicelo esitsha seSkype sisasebenza ku-Ubuntu. Inguqulelo entsha iza nezinto ezintsha njengokubiza iqela levidiyo ...
RSS Guard 3.4.1, feed feed eneempawu ezintsha
Kule nqaku siza kubona indlela yokufaka i-RSS Guard. Oku kulula kwaye kulula ukusebenzisa umfundi wesondlo kwi-Ubuntu kunye neLinux Mint.
I-DigiKam 5, uLawulo lweFoto eDijithali kwi-Ubuntu / Linux Mint
Kule nqaku siza kujonga kwi-DigiKam 5. Lo ngumphathi wefoto yedijithali esebenza ngokugqibeleleyo kwi-Ubuntu nakwiLinux Mint.
IGnome iya kwenza iiphakheji ze-snap ezincinci kwaye zisebenze ngakumbi
Ubuntu iyaqhubeka nokusebenza kwiiphakheji zesnap. Ezi phakheji ziza kwi-desktop yeGnome. Idesktop enokufakwa ziiphakheji ze-snap ...
Ubuntu obunobuGcisa beAadvark budinga uLuntu lwayo
Ubuntu Artful Aadvark iya kuba yinguqulelo enkulu elandelayo yoBuntu. Inguqulelo enotshintsho oluninzi kodwa ikwanazo nezipele ezimbalwa ...
I-Texmaker 5.0, umhleli weLaTeX ngombonisi wePDF kwi-Ubuntu 17.04
Kule nqaku siza kujonga i-Texmaker. Umhleli weLaTex onombonisi wePDF esinokuwusebenzisa ku-Ubuntu 17.04 okanye ngaphezulu.
Uyifaka njani iMongoDB kwi-Ubuntu
Sikuxelela indlela yokufaka iMongoDB kwi-Ubuntu LTS yethu, isiseko sedatha esinamandla nesiluncedo esinokuthi sithathe indawo yezinye ezinje nge-MySQL okanye iMariaDB ...
I-Nautilus-svgresize, yenza ubungakanani kwakhona kwimifanekiso ye-SVG ku-Ubuntu
Kule nqaku siza kubona iskripthi esibizwa ngokuba yi-svgresize esinokuthi senze ubungakanani bayo kwakhona .svg ngaphandle komzamo.
Ezi zezinye zeendaba eziza kubakho ku-Ubuntu Budgie 17.10
U-Ikey Doherty uthethile malunga neempawu ezintsha ze-Budgie Desktop, amanqaku amatsha azakufakwa kwi-Ubuntu Budgie 17.10, incasa entsha esemthethweni ...